Zava-bavaka 30 Fomba hialana amin'ny faharerahana amin'ny razana | FIVAVAHANA VAVAKA
Home Teboka am-bavaka Zava-bavaka 30 ho an'ny famongorana ny faharatsiana ny razana
2 Kôrintianina 10: 4 (fa ny fitaovam-piadian'ny adintsika dia tsy araka ny nofo, fa mahery amin'ny alàlan'Andriamanitra handrava ny mànda fiarovana;) 10: 5 Mamono ny fisaintsainana sy ny avo rehetra izay manandratra ny tenany amin'ny fahalalana an'Andriamanitra, mamabo ny eritreritra rehetra amin'ny fankatoavan'i Kristy;
Androany isika dia handray anjara amin'ny toerana fivavahana amin'ny fanimbana ny toerana ratsy amin'ny razana. Ny fihinanan-dratsy rehetra ataon'ny devoly amin'ny fiainanao dia haringana amin'ny anaran'i Jesosy izao. Inona no atao hoe ratsy fanahy? Ireo dia toeram-piarovana demony hanohitra ny mpino sy ny tsy mpino. Mitazona azy ireo sy miadana ao izy ireo. Avy amin'ny fanahin'ny razana ity fanahy ratsy ity, fanahy nentin'ireo razana. Ireo fanahy demonia ireo izay nampidirina tamin'ny fanompoana sampy. Rehefa manompo sampy ny olona, ​​dia tena mivavaka amin'ny demonia kosa izy ireo tsy mahalala na tsy mahalala. Ireo fanahy manohy manenjika ny fianakavian'ity fianakaviana ity na dia efa ela aza ny razana. Ny tanjon'ny hery razambentsika dia ny mitazona ireo babo ho andevo sy maharitra mandrakizay stagnation. Saingy raha mandray anjara amin'ity vavaka ity ianao amin'ny famotehana ny fangejana ny razana, ny tsirairay avy amin'ny devoly amin'ny fiainanao dia hiparitaka amin'ny anaran'i Jesosy.
Ny fomba tokana handrava ny razana ratsy dia ny alalany Vavaky ny ady. Ny devoly dia tsy manaiky afa-tsy ny hery sy ny hery. Tsy miala amin'ny tanànan'ny razanao amin'ny fahalemem-panahy ianao na manala baraka ny devoly, manohitra ny devoly amin'ny alàlan'ny vavaka ianao, manafika ny devoly ary manary azy hiala amin'ny fiainanao amin'ny herinao. Na inona na inona tsy tadiavinao, tsy jerenao, ity vavaka ity dia manondro ny fanapotehana ny fihazonana ny zava-dratsy nataon'ny razana dia hanome anao hery handrava ny fitazonana ny devoly noho ny fiainanao sy ny anjaranao, handrava ny fihazonana ny fahantrana, tsy fahabangana, tsy hitoerana, tsy fahombiazana , fihemorana sns ... Hanafaka anao anio amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Mamporisika anao aho hivavaka am-pinoana ity teboka vavaka ity anio ary hahazo ny fahafahanao.
1. Ry Tompo Tompo ô, avelao haringana tanteraka ny faravodilanitra sy ny sezan'ny fahavaloko amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
2. Ràn'i Jesosy, hamafa ny tany ara-dalàna rehetra ataon'ny fahavalo amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
3. Nakatoko ny varavarana rehetra nosokafan'ny fahavalo tamin'ny fiainako tamin'ny ran'i Jesosy.
4. Ny sakana mivaingana rehetra, namboarin'ny fahavalo hanakanana ny fihenan'ny voan'ny fiainako, manapotika tanteraka, amin'ny anaran'i Jesosy.
5. Ny fototra tsirairay naorin'ny fahavalo tamin'ny fiainako dia horavana tanteraka, amin'ny anaran'i Jesosy.
6. Ny teny rehetra mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra nolazaina ahy dia mianjera amin'ny tany ary aza mamoa amin'ny anaran'i Jesosy.
7. Fatorako amin'ny fiainako ny matanjaka, ary raisiko amin'ny fananany ny fananako.
8. Ry lehilahy mahery fanimbana vatana, mifatotra amin'ny anaran'i Jesosy.
9. Ry lehilahy mahery manimba saina, mamatora, amin'ny anaran'i Jesosy.
10. Ry lehilahy mahery fanimbana ara-bola, mamatora, amin'ny anaran'i Jesosy.
11. Ry fanahiko, mivoaha avy ao amin'ny tranomaizin'i satana rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy.
12. Ry Tompo Andriamanitra ô, mitsangàna ary afaho amin'ny herin'i satana ny fanahiko, amin'ny anaran'i Jesosy.
13. Atsangano mankany an-danitra ny tananao ankavanana ary ambarao izao manaraka izao: “Manoratra ny fiainako ho amin'ny fandrosoana aho” amin'ny anaran'i Jesosy.
14. Ny fiatrehana demony rehetra, mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainako, hofaranana amin'ny anaran'i Jesosy.
15. Ny aiko tsy amidy. Tsy mandà ny hamidy ahy amin'ny demonia amin'ny herin'i Jesosy aho.
16. Izay nitelina ny voninahitro sy ny voninahitro, dia nandoa azy tamin'ny kotrokorana, tamin'ny anaran'i Jesosy.
17. Ry Andriamanitro ô, avelao ny afo handeha eo alohanao ary handrava ny manodidina ny fahavalonay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. (mivavaha ity vavam-bavaka ity miaraka amin'ny Salamo 97: 3 alohan'ny fitsangatsanganana, dinidinika na asa vaovao.)
18. Ny vahiny rehetra manodidina ahy, miparitaka amin'ny afo (alohan'ny handaozany isan-trano) isan'andro amin'ny anaran'i Jesosy.
19. Amin'ny tananao ankavanana eo an-dohanao, ambarao izao manaraka izao: "Hery fampiroboroboana, mitoera amiko, amin'ny anaran'i Jesosy."
20. Ny nofo sy ny demonia rehetra, hampangina eo anatrehan'Andriamanitra ankehitriny. Mitenena, Tompo ô, mihaino ny mpanomponao, amin'ny anaran'i Jesosy. (Miato mandritra ny 5 ka hatramin'ny 15 minitra na mihoatra mba hihainoana an'Andriamanitra.)
21. Ny lavaka tsirairay, nohadin'ny fahavalo, dia tonga fasana ho azy, amin'ny anaran'i Jesosy.
22. Izaho dia manadino sy tsy misy dikany, ny vokatry ny fifandraisana rehetra amin'ny satana mivezivezy amin'ny maha-lehilahy azy, amin'ny anaran'i Jesosy.
23. Nongotako ny fiarovana mafy an'ireo olon-dratsy amin'ny faritra rehetra amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
24. Izay mety ho varotra ratsy, izay miantraika amin'ny fiainako tsy ara-drariny, dia foanana, amin'ny anaran'i Jesosy.
25. Ny asa maizina rehetra, natao tamiko tamina mangingina, hoharihary ary hatsipy amin'ny anaran'i Jesosy.
26. Manala ny tenako amin'ny fanahy ratsy aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
27. Ry Tompo, avelao ny fo rehetra manohitra ahy, amin'ny anaran'i Jesosy.
28. Mandidy ny mpampahory rehetra aho mba hiala sy handositra amin'ny faharesena, amin'ny anaran'i Jesosy.
29. Mamatotra ny matanjaka rehetra aho, manana ny fananako amin'ny fananany, amin'ny anaran'i Jesosy.
30. Nanapaka aho, ny ozona momba ny tsy fahombiazana mandeha ho azy, miasa amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
Previous lahatsoratraZava-bavaka 30 ho an'ny fandresena ny herin'ny razana
Next lahatsoratraTorohevitra 30 momba ny fanafahana amin'ny fahababoana